မစည်သော်လည်း ပီခဲ့သည် — MYSTERY ZILLION
April 2009 edited August 2010 in MZ News
вЂњကျွန်တော်တို့က ဒီပွဲကို ဟိုးအဝေးကြီးက လာခဲ့ရတာပါ။ မုံရွာကပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီရောက်တော့ သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီးနဲ့လည်း တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော် ဝါသနာပါတဲ့ နည်းပညာတွေကို သိခွင့်ရ၊ ဆွေးနွေးခွင့်ရတော့ ပိုပြီးပျော်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နှစ်တိုင်းဒီလိုပဲ စည်စည်ကားကားနဲ့ နည်းပညာပွဲတွေကို လုပ်သွားဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။вЂќ
အထက်ပါစာသားများသည် ဂူးဂူးဟု အွန်လိုင်းတွင် သိကြသော လူငယ်တစ်ဦး၏ နည်းပညာပွဲ မတိုင်ခင် မီဒီယာများက မေးလာခဲ့သည်ရှိသော် ဖြေနိုင်ရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်လာခဲ့သော ပြောစကားများထဲမှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် နည်းပညာပွဲသို့ရောက်သောအခါ သူထင်ထားသလို မဟုတ်။ ထင်သလောက် လူမဝင်။ ခုံနေရာလွတ်တွေ အများကြီး ဖြစ်နေသည်။ စိတ်ထဲမှာ စိုးရိမ်စိတ်တွေက ကြီးစိုးလာသည်။
вЂњပွဲက အဆင်ပြေမှ ပြေပါ့မလား။ လူတွေကလည်း နည်းလိုက်တာ။вЂќ
အထဲကိုရောက်တော့ ပွဲကမစသေး။ နည်းပညာလောကမှ အထင်ကရ လူသိများသော သူများဆိုလို့ ကိုရဲမြတ်သူ၊ ကိုသောင်းစုငြိမ်းနှင့် ကိုညီလင်းဆက်တို့သာ တွေ့ရသည်။ ကျန်တဲ့သူတွေက MZ ကို ချစ်သော မင်ဘာများနှင့် Organizer များ။ သူတို့မျက်ဝန်များတွင်လည်း အားမလိုအားမရ ဖြစ်မှုများ အတိုင်းသား မြင်နေရသည်။ သူတို့မျှော်လင့်ထားသည့် ပမာဏထက် တစ်ဝက်ခန့်သာ ရှိသော ပရိတ်သတ်များကို ကြည့်ပြီး စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်နေကြသည်။
вЂњလူနည်းတယ်နော်၊ April Fool သွားလုပ်လိုက်တာကိုး။ ဒီတော့ လူတွေက ပွဲမရှိဘူးထင်ပြီး မလာကြတော့တာ ထင်တယ်။вЂќ
вЂњဘယ်လို April Fool သွားလုပ်လိုက်လို့လဲвЂќ
вЂњကိုစေတန်လေ၊ ပွဲမဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီး April Fool လိုက်တယ်လေвЂќ
Organizer များ တီးတိုးတီးတိုး သဖန်းပိုးထိုးနေကြခြင်း ဖြစ်သည်။
вЂњMZ က လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို တင်ပြပါ့မယ်။ MZ ဆိုတာ နည်းပညာသီးသန့်ဖိုရမ်ပါ။ MZ မှာ Project များအနေနဲ့ Dictionary တွေ၊ အခြား အင်္ဂလိပ်စာ အထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့ ဆိုက်ရယ်၊ ပြီးတော့ နည်းပညာ သီးသန့် Wiki ရယ် вЂ¦..вЂќ
MZ ၏ Admin တစ်ယောက်လည်းဖြစ် Organizer လည်း ဖြစ်သည့် အိတ်ဇစ်တာက ပြောသွားတော့ MZ ၏ တစ်နှစ်တာ စွမ်းဆောင်မှုများကို တစ်ရေးရေး ပြန်မြင်ရောင်လာကြသည်။ စုပေါင်းညီညာ အောင်ကြောင်း ဖြာစေသော အကြောင်းအရာများ။ Dictionary က စကလုံးများကို စုပေါင်းပြီး ရိုက်ခဲ့ကြတာတွေ၊ အချင်းချင်း ညီညွတ်မှု၏ အသီးအပွင့်များ၊ စေတနာသန့်သန့်ဖြင့် နည်းပညာလိုအပ်ချက်များကို ကြိုးစာဖြည့်စည်းခဲ့ ကြသည်များ။ စိတ်ကူးအစဉ်တွင် တစ်ခုပြီး တစ်ခု အစီအရီပေါ်လာကြသည်။
вЂњဒီလိုကြတော့လည်း ငါတို့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ အရာထင်သားပဲ။ ဒါတွေဟာ တကယ့်လိုအပ်ချက်၊ Brain Drain ဖြစ်နေတာတွေကို နိုင်ငံတကာက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပေါင်းစည်းပြီး Brain Gain ဖြစ်စေသော အောင်မြင်မှု၊ ဒါလည်း ဦးနှောက်တွေ ဘယ်လိုပြန်ရအောင် လုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ အချက်ကို မြင်သာထင်သာအောင် မီးမောင်းထိုးပြလိုက်နိုင်တဲ့ အချက်တွေပဲвЂќ ဂူးဂူးတစ်ယောက်တည်း စိတ်ထဲမှာ တွေးနေမိသည်။
ဒီလိုစဉ်းစားနေရင်းမှာပင် MZ ကို စတင်တည်ထောင်သူ ကိုစေတန်တက်လာသည်။ လူပုံက ထုံးစံအတိုင်း ပိန်ပိန်ရှည်ရှည်၊ အဲယားကွန်း၏ လေနှင့်အတူ ဟိုယိမ်း၊ ဒီယိမ်းဖြစ်နေသည့်ပုံ။ အသားကမည်းရသည့်ကြားထဲ မီးစလိုက်က ထိုးမထား။ ဒီတော့ အရင်တစ်ခါ ပွဲတွေတုန်းက တိတ်တိတ်ပုန်း ကင်ပွန်းတပ်ခံထားရသော မည်းမည်းစေတန် က မည်းမည်းစေတန်ပင်။
вЂњကျွန်တော်က ornagai ဆိုတဲ့ အွန်လိုင်း Dictionary အကြောင်း ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး ပြောချင်တာက အိုနာဂိုင်းလို့ ခေါ်တဲ့ စကားလုံးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။ အဲဒီ စကားလုံးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ဘာလို့ထင်ပါသလဲ။ တကယ်တော့ ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ BornAgain ဆိုတာကိို ရိုက်ထည့်တာ ရှေ့က B နဲ့ နောက်က n ဆိုတဲ့ စကားလုံးပြုတ်သွားတာပါ။вЂќ
အစပိုင်း ထိုစကားလုံးကို ကျွန်တော်က ဂျပန်စာလုံးတစ်ခုဟု ထင်ခဲ့သည်။ ယခုကိုစေတန် ရှင်းပြမှ သိရတော့သည်။ Google လို တမင်သက်သက် လိုက်မှားသလားမသိ။ Google က မှားပြီး နာမည်ကျော်လာသည်။ ကိုစေတန်၏ Ornagai လည်း မှားပြီး နာမည်ကျော်ပါစေဟု ဆုတောင်းမိသည်။ မီးစလိုက်ထိုးမထား သဖြင့် မှောင်နေသော်လည်း ကိုစေတန်၏ မျက်လုံးများကတော့ မျှော်လင့်ချက် ယုံကြည် ချက်များနှင့် တစ်လက်လက်တောက်နေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နည်းပညာလောကအပေါ် လူငယ်တစ်ဦး၏ အဖြူရောင်သက်သက် စေတနာတွေ မြင်နေရသည်။ တကယ်တော့ အရောင်မရှိဟု ပြောလျှင် ပိုပြီး မှန်မည်ထင်သည်။ အရောင်မရှိ ပကတိအကြည်သက်သက် စေတနာများ။
вЂњကျွန်တော်က Open Technology နဲ့ Open Source ကို ပေါင်းစေချင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့လို Developer တွေအတွက် အများကြီး အဆင်ပြေသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Open Technology နဲ့ Open Source အကြောင်းကို အနည်းငယ် ရှင်းပြလိုပါတယ်။ Open Source ဆိုတာ သူတို့ရေးထားတာတွေ ယူသုံးလို့ရတဲ့ သဘောပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ သူတို့ရေးထားတဲ့ဟာတွေကို အကုန်နားလည်အောင် လုပ်ဖို့ကြတော့ ကျွန်တော်တို့ အတွက်မလွယ်ပါဘူး။ အကုန်နားလည်ဖို့ မပြောနဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း နားလည်ဖို့တောင် မလွယ်ပါဘူး။ ဒီတော့ အဲဒီ Open technology ကို မျှော်လင့်မိပါတယ်။ သူကတော့ နည်းပညာတစ်ခုလုံးကို ဝေမျှပေးတာပါ။ အဲဒီလို Open Technology ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ သူတို့ရေးထားတာတွေ သူတို့တည်ဆောက်ထားတာတွေကို အသေးစိတ် လေ့လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆို ကိုယ့်အတွက် ကိုက်ညီတဲ့ Code တွေကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် အခြားကိုယ်ပိုင်ရေးထားတာတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး ဖြစ်ဖြစ် အသုံးချနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အခုလုပ်ထားတာတွေကိုလည်း Open Technology မိတ်ဆက်ပေးရင် Open Technology ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။вЂќ
ကိုစေတန်၏ ရက်ပါဆန်ဆန် ပြောသွားသော စကားများတွင် မျောပါရင်း နည်းပညာလောကတွင် Open Technology ၏ အရေးပါပုံကို တွေးတောပုံဖော်ကြည့်မိသည်။ Infrastructure များကို ထိုကဲ့သို့သော Open Technology လုပ်နိုင်လျှင် အားလုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြလျှင် နည်းပညာလောက မြန်မြန် တိုးတက်လာ နိုင်ပုံကို ဆဝါးမိသည်။ သို့သော် အချို့အချို့သော သူများက Infrastructure များကို စျေးကွက်တင်ဖို့ ကြိုးစားနေတာတွေ တွေ့နေရပြန်တော့ စိတ်ပျက်မိသည်။ ကိုယ့်အတွေးနှင့်ကိုယ် မျောနေရင်း Presenter နှစ်ယောက်ကို ကြည့်မိသည်။ ခေတ်စကားနှင့် ပြောရလျှင် ခပ်မိုက်မိုက် ဘဲနှစ်ပွေ။ တစ်ယောက်က ကိုစည်သူ၊ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ နာမည်မသိ၊ လူချင်းလည်း မသိ။ ကိုစည်သူကတော့ သူ၏ ထုံးစံအတိုင်း ဟိုဖက်ဂိုင်းကူး ဒိဖက်ဂိုင်းကူးပြီး အလုပ်များနေသည်။ သူ၏ ထုံးစံအတိုင်း ဟိုတစ်ယောက်ကို တစ်ဖြတ် ညွှန်ကြားလိုက်၊ ပျောက်သွားလိုက်နှင့် ဟုတ်နေသည်။ သေချာတာ တစ်ခုကတော့ သူတို့နှစ်ယောက်လုံး တာဝန်ကျေကြသည်။ Presentation လုပ်ရာတွင် ခပ်တောင့်တောင့်တွေမဟုတ်။ Entertainment ဆန်သည်။ သွက်သည်။ အချင်းချင်း အသောအထေ့လေးတွေ အနည်းငယ်သုံးပြီး ပွဲကို ထိန်းကျောင်းသွားနိုင်သည်။ (စည်သူ ငါ့ကို လက်ဖက်ရည်တိုက်ဖို့ ပြင်ထား) သူအလုပ်များနေတာ ကြည့်ရင်း သူကို ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ အကြောင်းပြုပြီး စချင်သလိုလိုဖြစ်လာသည်။ မကောင်းတတ်သဖြင့် ကြိတ်မှိတ်ထားလိုက်ရသည်။ (စည်သူ ငါ့ကို လက်ဖက်ရည်တိုက်ရင်တိုက် မတိုက်ရင် ငါ့အကြောင်း သိတယ်ဟုတ်)
ကျွန်တော် တို့လို မလာ နိုင်တဲ ့လူတွေ အတွက် တော့သရေ ကျစရာဘဲဗျာ..
အစ်ကိုရေ..ဓါတ်ပုံလေးတွေ နဲ ့တင်ပါလားဗျ.. :d
ကျနော်လည်း ပွဲမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးထင်နေလို့။ ဟောပြောဆွေးနွေးကြတဲ့သူတွေပြောတဲ့ စကားတွေ အစအဆုံး တင်ပေးပါလား မော်မော်မင်မင်တို့ရေ။ ကျနော်တို့လို နယ်ကလူတွေအတွက် ပြည့်ပြည့်စုံစုံသိချင်လို့ပါ။ :d ပွဲမှာေ၀တဲ့ အခွေတွေရော ဘယ်မှာရနိုင်မလဲ။ ရန်ကုန်က ညီလေးကို ကူးခိုင်းလိုက်မယ်။ ဒေါင်းရတာတွေက လိုင်းမကောာင်းတော့ အဆင်မပြေလို့ပါ။ :103:
ှဓါတ်ပုံကတော့ တဖျတ်ဖျတ်နဲပဲ ကိုဂျစ်ပစီ လက်ရာလေ (ငါ့လက်ဆောင်ယူတဲပုံတော့ရိုက်ပေးဘူး) အများကြီးပဲ တွေ့ရမှာပါ (ထောင်ပေးခဲ့ပီ )
ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ MZ ပွဲကို အောင်မြင်အောင် ကျင်းပခဲ့သော်လည်းပဲ ကျွန်တော်တို့ မျှော်မှန်းထားသော လူဦးရေး ၃၀၀ မရောက်ရှိလာခဲ့ပဲ လူ ၁၁၀ လောက်ပဲရောက်ရှိလာပါတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ တစ်ဝက်တွင်ပြန်သွားသူ။ တစ်ဝက်မှ ဝင်လာသူ။ အစစသော အကြောင်းကြောင့် ခန်းမကျယ်ထဲမှာ ၄ ပုံ ၁ ပုံပဲရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော် April Fool လုပ်ခဲ့မိတာကြောင့် အခုလိုဖြစ်သွားရတယ်ဆို ကျွန်တော် အနူးအညွှတ်တောင်းပန်အပ်ပါတယ် :77:
Organizer များအနေနဲ့ အားမလိုအားမရဖြစ်နေခြင်းကို မျက်စိမှာ အထင်းသားပေါ်နေပါတယ်။ မျှော်လင့်ချက်တွေ ကျဆုံးသွားတဲ့ မျက်လုံးတွေကို ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတဲ့အတွက် ကျွန်တော် အရမ်းပဲအားနာမိတယ်။
ကျွန်တော် ဆောင်ရွက်တာ လိုသွားတာလေးတွေရှိတယ်။ April Fool လုပ်မိတာကြောင့်လည်း ပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ပြီး Journal တွင် ကြော်ငြာထည့်သွင်းခြင်းကို နည်းနည်းလေးစောသွားခြင်း ၊ Computer တက္ကသိုလ် စာမေးပွဲဖြေနေခြင်း ၊ April လဟာ ခရီးသွားလဖြစ်နေခြင်း ၊ သင်္ကြန်အတွက် ပြင်ဆင်နေခြင်း စတာတွေကြောင့် လူဝင်နည်းနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဖြေသိမ့်လိုက်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့တွေ စိတ်ကို တင်းပြီး ဟန်ချက်ညီညီ တင်ဆက်သွားတဲ့ ကိုစည်သူနဲ့ မော်ဒယ်နဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းဆန္ဒ ကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ လူအနည်းအကျဉ်းလေးရှိပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ လုပ်ပြချင်တာတွေ ပြောပြချင်တာတွေကို ပြောပြလိုက်ရတယ်။ အဲဒါကို ကျွန်တော် ကျေနပ်တယ်။ freelance အကြောင်းအားပါးတရ ဆွေးနွေးခွင့်ရခဲ့တယ်။ အချိန်မလောက်လို့ ဆွေးနွေးပွဲကို မြန်မြန်သိမ်းလိုက်ပေမယ့် အားရတယ်။ ဒီနေ့ပွဲဟာ လူနည်းတာကလွဲပြီး အားလုံး ကောင်းပါတယ်။
အထူးခြားဆုံးက သူများတွေနဲ့ မတူတဲ့ တင်ဆက်မှုကို ချပြနိုင်ခဲ့တယ်။ ပုံမှန် သမာရိုးကျ တင်ဆက်မှုမဟုတ်ပဲ Free Style တင်ဆက်ခွင့်ရှိခဲ့တယ်။ အဲဒီအတွက် Mac Book အသုံးပြုခွင့်ပေးတဲ့ ထူးတေဇာ ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူ့ laptop နဲ့ remote ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ computer အနားမှာမရှိပဲ presentation ကို ပြသနိုင်ခဲ့တယ်။ presentation မှာ မီးအားလုံး အမှောင်ချထားပြီး မီးလုံးအသေးလေးတွေ ထွန်းပြီး presentation ကို အာရုံစိုက်အောင် ကျွန်တော်တို့တွေ စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ Wireless Mic မသုံးပဲ collar Mic နဲ့ လက်ထဲမှာ ဘာမှမကိုင်ပဲ လွတ်လပ်စွာ ပြောခွင့်ရခဲ့တယ်။ Presentation ကို ထူးထူးခြားခြား ပြခဲ့ရတယ်။ တခြားပွဲတွေနဲ့ မတူတဲ့ Talk Show မှာ freelance အကြောင်း အားပါးတရ ပြောဆိုဆွေးနွေးခွင့်ရခဲ့တယ်။ Myanmar နိုင်ငံရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို သိခဲ့ရတယ်။ နောက်ပြီး လူတိုင်းကို မုန့်အဝကျွေးနိုင်ခဲ့တယ်။ လူနည်းတဲ့အတွက် လာတဲ့ လူတော်တော်များများ လက်ဆောင်တွေရခဲ့ကြတဲ့အတွက် ဝမ်းသာမိပါတယ်။ စိတ်ပျက်နေတဲ့ Organizer တွေကို မဲထဲမှာ ရွေးချယ်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါ ပျော်သွားတဲ့အတွက် ကျွန်တော် တော်တော်စိတ်ကျေနပ်မိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Gipsy ပေါ့... Stick2GB မဲ ပေါက်တော့ ထက ပြီး စင်မြင့်ပေါ်တက်သွားတာ မျက်စိထဲက မထွက်ဘူး။ ရိုက်နေတဲ့ camera ကို ဘေးနားက လူကို ပေးပြီး ခုန်ပေါက်ပြီး စင်ပေါ်တက်သွားတယ်။ နောက်ပြီး Member of the year 2009 ကို ကိုသာသာ ကိုပေးခဲ့ပါတယ်။ :67:
ဘာပဲပြောပြော ကျွန်တော်တို့ လူနည်းပေမယ့် Ornanizer တွေ တာဝန်ကျေပါတယ်။ IT Quiz တွေလည်း လွယ်ပေမယ့် ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။
ပွဲမစည်ပေမယ့် မြည်ခဲ့ပါတယ်ဗျာ..... ပွဲပြီးတော့ လူက ဝမ်းနည်းနည်းလေး နည်းလာတယ်... မျှော်မှန်းသလောက် မဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ တွေ အကောင်းဆုံး လုပ်ပြနိုင်ခဲ့တယ်.. Brain Drain ကနေ Brain Gain ဖြစ်အောင် လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာ ချပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဗျာ....
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီပွဲမှာ Member တွေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံတွေ့ရတဲ့အတွက်ရော၊ ဆွေနွေးခဲတဲ့ Topic တွေအတွက်ရော တော်တော့်ကိုကျေနပ်ပါတယ်။ MZ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ :67:
ကျတော်အမြင်ပြောရရင် တော့ လူနဲတာဟာ အချိန်ကြောင့်ဖြစ်မယ်
ထမင်းစားချိန်မှာပြန်မယ်ပေါ့နော် ဒါဆိုပြန်လာဖို့မလွယ်ဘူးလေ ကင်တင်းမှာသွားစားဖို့ကပြေလည်တဲ့သူရှိမယ် မပြေလည်တဲ့သူရှိမယ် ဒါလဲပါမယ်ထင်တယ်
ထမင်းကျွေးခိုင်းတာဟုတ်ဘူးနော် အဲလိုအချိန်ကိုဘယ်လိုထိန်းမလဲဆိုတာကို စဉ်းစားဖို့ပါ
နောက်တစ်ခုက ဧပရယ်ဖူးပေါ့ နော် ဒါလဲနဲနဲလောက်ပဲဆိုင်မယ်ထင်တယ်
ပီးတော့ လိုင်းကျနေချိန်နဲ့သွားတိုက်ဆိုင်တော့ mysteryzillion အဖွဲ့သားတွေကော
နောက်ပီးလာတဲ့သူပြန်ကုန်တာကတော့ အချိန်ပေါ့နော် ထမင်းစားချိန်တစ်ချက်ထောက်တယ်
နောက်နှစ်ပေါ့ ကိုစေတန် ဒီနှစ်ထက် ကောင်းမှာပါ။
ကျွန်တော်ကိုစည်သူ့ကိုပြောခဲ့သေးပါတယ်... ဒါပေမယ့် ေ၀ဖန်လိုတဲ့ သဘောတော့မဟုတ်ပါဘူး.. အကြံပြုတဲ့သဘောပါ.. သူက နှစ်ပတ်လောက်ကတည်းက ကြိုပြောထားလိုက်တယ်ဆိုတော့ စာပေစိစစ်ရေးတင်ရမှာကို ငဲ့ပေးလိုက်တာပါ.. အမှန်က တစ်ပတ်အလိုလောက်မှကြိုပြောရင် ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်.. အခုက တစ်ပတ်လောက်ကြိုကြော်ငြာလိုက်တော့ ဂျာနယ်၀ယ်ဖတ်သူတွေက အမြဲပြန်ဖတ်နေတာမှ မဟုတ်တော့ မေ့သွားပြီး မလာကြတာလဲ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် မနေ့က မန်ဘာတွေ လာကြတာနဲ့တင်.. သူတို့ ဟောပြောတာတွေနားထောင်သွားကြရတာနဲ့တင် ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ အလုပ်ရှုပ်ခဲ့ရသလောက်က တန်ပါတယ်.. ဘာပဲပြောပြော မနေ့က ကျွန်တော်ပွဲပြီးအောင်မနေရတာလောက် ၀မ်းနည်းတာမရှိပါဘူး.. ဟက်ကင်းအကြောင်း နားထောင်ချင်ပေမယ့် နားမထောင်ခဲ့ရဘူး.. မနေ့က ကျွန်တော် organizer တာ၀န်မကျေခဲ့လို့ ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့... ဘာလိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပွဲကို အောင်အောင်မြင်မြင်ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ organizer တွေကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်... နောင်နှစ်မှာလဲ ပွဲကို ဒီထက်ပိုအောင်မြင်အောင် ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ကြတာပေါ့...
MZ ရဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်ထင်ခဲ့တာက Hacking Prevent Technologies တွေကိုဦးစားပေးပြီး
ကျွန်တော်ကို ကိုစည်သူ ကတော့ပြောပါတယ်"အစ်ကိုပထမစီစဉ်ထားတာကအဲဒိ tech ကို
Member တွေနဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကို Respondsတောင်းတော့Membersတွေကမေးတာကို
April 2009 edited April 2009 Banned Users
Hello! Admin and Moderator!
Please make another topic for infofreak posts. I just want to make this topic only for MZ Anni.
ုူအရမ်းအားကျမိပါတယ်ဗျာ .....ကျွန်တော်တို့ ကခုမှ အင်တာနက်ဆိုင် ပျာတာအဆင့်ပဲ ရှိသေးပေမယ့် ခုလိုနည်းပညာဖိုရမ်ကြီးရဲ့ တွေ့ဆုံမှုတွေကို ဖတ်ပြီး အရမ်းအားကျမိပါတယ် ကျွန်တော်တို့အတွက် အင်အားတွေ ပေးနေသလိုလဲခံစားမိပါတယ် ..........ဘာပဲပြောပြောဒီလိုဖို၇မ် ကြီးတွေမှာ ကိုယ်မသိတာ မေးတဲ့သူကမေး ဖြေတဲ့လူကဖြေနဲ့ တကယ့်စာသင်ကျောင်းကြီးပမာပါပဲ ......................ကျွန်တော်တို့အတွက် အားသစ်တွေပေးနေတဲ့ mz ဖိုရမ်ကြီး ဒီထက်မက တိုးတက်အောင် မြင်မှုတွေနဲ့ ေ၀ဆာနေပါစေလို့ ကျွန်တော်တို့ ဆုတောင်းပေးနေပါတယ် mz ကြီးရေ..........................
ok then, i'll tell my opinion.
when aung khant make the presentation abt the online security, i'm pretty sure that most of the ppls dun know even the basic concept of security property.
(i told like that coz after the presentation of yehg, one member asked him that
To download the movies from yehg, do he need to register @ yehg or not
It shows that he isn't familiar with the yehg site. then, i'm pretty sure that the things yehg told are already included in their site.
for the another thing, hopefully that u'll remember thataguy askedaquestion
it's alsoamessy question coz if he wish to know properly, he should read before he ask
(i mean to seek and read from online before the seminar)
SQL Injection has the wide scope and has large range of itself.
during the presentation time, yehg can't explain the question "What is SQL Injection" in time.
To explain What is SQL Injection, it need several times.
then, i haveaquestion
Which member asked the critical question in systematically?
although they tell that I'd like to know the online security, i'm pretty sure that they dun wish to know indeed and they just want to avoid from self study.
I don't wish to continue.
if i continue, the mz members would hate me more and more.
Mz ပွဲကို ပြောတဲ့ အတိုင်းလုပ်ပေးနိုင်တာကိုက ဂုဏ်ယူစရာပါ..
ဧပြီလဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် မလာနိုင်တဲ့လတစ်ခုဖြစ်နေတာကိုပဲ..စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်..
ဒီနှစ်တော့ အားလုံး ပြီးသွားပြီမို့ ပြန်လုပ်လို့ မရတော့ဘူူး.......... လိုအပ်ချက်တွေ ရှိသွားခဲ့သလို မျှော်လင့်မထားတဲ့ တင်ဆက်မှုတွေ ကိုလည်း မြင်တွေ့ခဲ့ရတာပဲလေ......... လူမလာတာကတော့ အကြောင်းအရာတွေ အားလုံး တိုက်ဆိုင်သွားလို့နေမှာပါ........... နောက်နှစ်ရောက်ရင်တော့ ဒီနှစ်ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ပြုပြင်ပြီး၊ အောင်မြင်တဲ့ ပွဲလေးတစ်ပွဲဖြစ်အောင် ထပ်ကြိုးစားကြတာပေါ့......... တစ်ခုတော့ ကျွန်တော် တော်တော် စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမိတယ်......... ဒီကိစ္စလေးကတော့ လုံး၀ လည်း မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်........ အဲ့ဒါကတော့ ကျွန်တော် ကံစမ်းမဲ မပေါက်တာပါပဲ....... ဟီး ဟီး........... ပျော်စရာအရမ်းကောင်းတဲ့ ပွဲတစ်ခုပါ........ ဗဟုသုတရော..ရင်းနှီးမှုရော.... လိုအပ်ချက်တွေကိုပါ(ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြောတာနော်) ထင်ထင်ရှားရှား မြင်ခွင့်ရခဲ့တယ်........ မင်ဘာ တွေ အချင်းချင်းလဲ ဆုံခွင့်ရတယ်.....(လူနဲ့nick နဲ့တွဲမိသွားတာပေါ့)........ ကိုညမီးအိမ်ဆိုတော်တော် ခန့်တယ်ဗျ....တရုတ်မင်းသား ဒေးဗစ်ချန်းနဲ့တူတယ်.....( အခုတော့ ရှိတော့ဘူး ဆုံးသွားပြီ)....... ဂျစ်(ပ်)စီဆိုရင်လည်း ရှာရွတ်ခန်းနဲ့ဆင်တယ်.........( ဟိုဇာတ်လမ်း ထဲက လေဖြတ်သွားတဲ့ အခန်းလေ)........ creativefox ကိုတော့ ဒို့အမျိုး အချင်းချင်းမို့ မပြောတော့ဘူး..... ကိုစည်သူကျတော့ တစ်မျိုး ဗျ....... သူနဲ့ မော်ဒယ် ကို မင်းဆန္ဒတို့ တွဲရပ်လိုက်ရင် ကိုမင်းဆန္ဒ ကို ပျောက်သွားရော........(ရှေ့ ကကွယ်ကွယ်နေလို့)....
MZ က ညီမလေးတွေ ၊ မမလေးတွေကတော့ အားလုံး ချောတယ်ဗျာ........(ကိုစေတန်ရေ နောက်နှစ်ပွဲလုပ်ရင် စင်ကို သံယက်မနဲ့ foundation ချပေးပါနော်) ......... နောက်တာနော်....
အချုပ်ပြောချင်တာကတော့........ ဒီပွဲဖြစ်မြောက်အောင် အထူးစွမ်းဆောင်ခဲ့သော ကိုစေတန်၊ ကိုစည်သူနှင့် အခြားအခြားသော် မော်မော်၊ မင်မင် နှင့် မန်ဘာများ၊ စပွန်ဆာပေးခဲ့ကြသော ကုမ္ပဏီများ(ကွန်ပျူတာဂျာနယ်၊ ဇော်ဂျီ၊ မြန်မာပီကော့) အား အထူးကျေးဇူး တင်ရှိပါကြောင်း MZ မှ မန်ဘာများအားလုံးကိုယ်စား ပြောကြားလိုက်ပါတယ်.............. (နောက်နှစ်ပွဲအားစောင့်မျှော်လျှက်.........................................)
ကိုစေတန်ရေ စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ ့ဗျာ။ လာတဲ့လူ တွေ ဗဟုသုတရတာပေါ့ဗျာ။ မဟုတ်ဘူးလား၊ ကျွန်တော် တစ်ခုတော ့ပြောမယ်ဗျာ။ စိတ်တော ့မဆိုးနဲ ံပေါ့ ဘာလဲဆိုတော ့တစ်ချို ့လူတွေ က MZ ဆိုတာဘာလဲတဲ ့ဗျာ။ ကျွန်တော်တောင် စိတ်လေသွားတယ် ။ ပွဲမလုပ်ခင် တစ်ပတ်လောက်အလိုမှာ ကျွန်တော် တစ်ခြားလူတွေ ကို invite လုပ်သေးတယ် ။ လာရမှာ ေ၀းတယ်တဲ ့မလာချင်ဘူးတဲ ့။ လာပြီးတော ့ရော ဘာလုပ်ရမှာလဲတဲ ့ဗျာ။ ကျွန်တော် လေ တော်တော် စိတ်ပျက်သွားတယ်။ ကဲ......... နောက်နှစ်တော ့member တွေ အားလုံး ၀ိုင်းပြီး ကြိုးစားလိုက်ပေါ့ဗျာ . ဟုတ်ဘူးလား..... Happy Birthday MZ
ကိုစေတန်ရေ စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ ့ဗျာ။ လာတဲ့လူ တွေ ဗဟုသုတရတာပေါ့ဗျာ။ မဟုတ်ဘူးလား၊ ကျွန်တော် တစ်ခုတော ့ပြောမယ်ဗျာ။ စိတ်တော ့မဆိုးနဲ ံပေါ့ ဘာလဲဆိုတော ့တစ်ချို ့လူတွေ က MZ ဆိုတာဘာလဲတဲ ့ဗျာ။ ကျွန်တော်တောင် စိတ်လေသွားတယ် ။ ပွဲမလုပ်ခင် တစ်ပတ်လောက်အလိုမှာ ကျွန်တော် တစ်ခြားလူတွေ ကို invite လုပ်သေးတယ် ။ လာရမှာ ေ၀းတယ်တဲ ့မလာချင်ဘူးတဲ ့။ လာပြီးတော ့ရော ဘာလုပ်ရမှာလဲတဲ ့ဗျာ။ ကျွန်တော် လေ တော်တော် စိတ်ပျက်သွားတယ်။ ကဲ......... နောက်နှစ်တော ့member တွေ အားလုံး ၀ိုင်းပြီး ကြိုးစားလိုက်ပေါ့ဗျာ . ဟုတ်ဘူးလား..... Happy Birthday MZ မနေ ့က ပွဲမှာ MZ တစ်ကယ်အောင်မြင်ပါတယ် ဗျာ.....................။
အကြောင်းကြောင်းကြောင့် မတက်ဖြစ်လောက်တော့ဘူးလို့ ထင်ထားပေမယ့် ကံကောင်းစွာနဲ့ရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်вЂ¦ အွန်လိုင်းမှာပဲ သိဖူးတဲ့ မင်ဘာ တွေနဲ့ အပြင်မှာတွေ့ခွင့်ရတာ ၀မ်းသာစရာပါвЂ¦ ပွဲတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးပြောရရင်вЂ¦ အပြည့်အ၀ စိတ်ကျေနပ်မှုမရှိပါဘူးвЂ¦ အဓိကကတော့вЂ¦. လာရောက်တဲ့သူ အလွန်နည်းပါးတယ်လို့ထင်ပါတယ်.. ကျွှန်တော် ကိုးနာရီခွဲမှာ ရောက်ခဲပါတယ်.. ဒါပေမယ့် လူ ဆယ်ယောက် ကျော်ကျော်လေးပဲတွေ့လို့вЂ¦ အမှန်တကယ်စိုးရိမ်ခဲ့ပါသေးတယ်вЂ¦ စုစုပေါင်းတစ်ရာလောက်လာတယ် ဆိုတာ..နည်းပါးတဲ့ပမာဏပါ.. ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ပွဲနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘာမှမကူညီခဲ့လို့вЂ¦ ဘာမှမပြောချင်ပါဘူးвЂ¦ အားလုံးကတော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားခဲ့တာသေချာပါတယ်вЂ¦ အခုပွဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို နောင်နှစ်များမှာပြင်ဆင်နိုင်မယ် လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်вЂ¦ အကြိုက်ဆုံး အပိုင်း ကတော့вЂ¦ ကိုစေတန် ကို ရဲမြတ်သူ ကိုပီစီ ကိုအောင်ခန့်တို့ရဲ့Talk Sow ပါပဲвЂ¦. ဒီတိုင်းကြီးပြောတာထက်စာရင် အခုလိုtalk မျိုးလေးကပိုပြီး ကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်.. ပွဲနဲပါတ်သတ်တဲ့ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများကိုလည်း မကြာမှီတွေ့ရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်.. အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြားမှ ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့ တာ၀န်ရှိသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်вЂ¦ နောင်နှစ်များမှာလည်း ဒီထက်ပိုပြီး ကောင်းတဲ့ နှစ်ပါတ်လည်ပွဲတွေ ကိုပါ၀င်ခွင့်ရဦးမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်..
ကျွန်တော်စိတ်အလိုမကျတာတစ်ခုကတော့ ဘယ်သူဟာ MZ မန်ဘာမှန်းမသိလိုက်ရတာပဲ။ ပြန်သာပြန်သွားတယ်။ ဘယ်သူတွေမှန်းမသိလိုက်ဘူး။ ကျွန်တော် ထပ်သိလိုက်တာ ၂ယောက်ပဲရှိတယ်။ ကိုစိုင်းကျော်စွာဝေ ရယ်။ ကို blueray ရယ်... အဲဒီ၂ယောက်ကလွဲပြီးဘယ်သူတွေကဘယ်သူတွေမှန်းကမသိလိုက်ရဘူး။ နှောင်နှစ်မှာ အဲလိုမဖြစ်အောင်တစ်ခုခုစီစဉ်ပေးပါဦး စိုင်းစိုင်းစေတန်ရေ...
K နိုင် wrote: »
တားတားကို ဆက်သွယ်ပြီ ပေးချင်တဲ့ ကိုကိုတွေ မမတွေအတွက် [email protected]
မှာ စောင့်နေပါတယ် ခင်ဗျာ လွန်စွာမှလာချင်သော်လည်း အခြေနေတရပ်ကြောင့်ပျက်ကွက်ခဲ့ရသဖြင့်
( (စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါသည် သို့ပေမယ့် တားတားလည်း cd လေးလိုချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ
လာကူးဆိုလည်း ရောက်အောင်လာခဲ့ပါမယ် နော် အဟီး :77::77::65::65:ပေးမယ်မဟုတ်လား:)):)):106::106:
ဒီ post ကို ဖတ်ပြီး နောင်တတွေ ရနေတယ်ဗျာ ။ မလာဖြစ်လို့လေ။ အမှန်တော့ စိတ်ထဲမှာ လာချင်နေတယ်ဗျာ ။ အခုလို ဖတ်လိုက်ရတော့ ထင်သလောက်လူတွေမလာနိုင်တာ သိလိုက်ပြီး ၀မ်းနည်းသွားသလို ကြီးခံစားလိုက်ရတယ်ဗျာ ။ ဒါပေမယ့်လည်း အမ်ဇက် က အောင်မြင်မှာပါ ဒီထက်မကပေါ့ဗျာ။ ယုံကြည်မှု့အပြည့် နဲ့သာ ဆက်လုပ်ကြပါလို့ ထပ်လောင်း အားပေးချင်ပါတယ်
။ဆရာ၀င်လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ ။အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ကြပါဗျာ ။ နောက်နှစ်အတွက်ကို ပဲ ဒီထက်ပို လုပ်နိုင်ပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အမ်ဇက်က စီဒီ လေးတွေကို ဘယ်မှာယူရမလဗျာ။ အားလုံးကို လေးစားလျက်.........................:77::77::77:
အော်.. ကျနော့မလည်း ပွဲကို တက်ဖြစ်အောင်တက်မယ်ဆိုပီး မတက်နိုင်လိုက်ဖူး... ပြီးခဲ့တဲ့ New Year ကိုပီဇီ၊ စေတန်၊ အိပ်ဇစ်တာ၊ ညမီးအိမ်၊ ဂျစ်ပဆီလေးတို့နဲ့ တွေ့ပီးတည်းက လာဖို့ပြောထားခဲ့တာ.. ပွဲရက် ကပ်တော့လည်း အားလုံးက လာခဲ့ပါလာခဲ့ပါ တစာစာခေါ်ကြတယ်.. ကျနော့မှာက လာစရာ စရိတ်မရှိ.. အဲဒါက ချေးငှားလာလို့ဖြစ်သေးတယ်... အဲလိုနဲ့ ကံကောင်းချင်တော့ နက်၀ပ်ဂိမ်းဆိုင်တစ်ဆိုင် ဆင်လိုက်ရလို့ စရိတ်အတွက် အဆင်ပြေသွားတယ်.. ဒီလိုနဲ့ ၂ ရက်နေ့လောက် မုံရွာက ထွက်ခဲ့မယ်ပေါ့... ၃၊ ၄ မှာ လုပ်စရာရှိတာတွေ ကူလုပ်ပေးပေါ့... စိတ်ကူးထားကာမှ.. ကျနော့ အဖေ အစာအိမ်ကသွေးယိုလို့.. ဘယ်လိုမှ မလာနိုင်ဘူး ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ...
အဲလို ကျနော် အရမ်းလာချင်ရက်နဲ့ မလာနိုင်တာကို ကိုပီဇီကြီးက ကျနော့အနေနဲ့ ရေးပေးတဲ့ အတွက် အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်... MZ မှာ သိပ်လဲ အကျိုးမပြုနိုင်ပဲနဲ့ ကျနော့်အပေါ် ခင်မင်ရင်းနီးစွာ (နေတာ၊ စားတာ ပူစရာမလို ဆိုပီး) ဖိတ်ခဲ့ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းအားလုံးကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါရစေ...
အခုလိုဖတ်ရတော့.. ပွဲကို မတက်လိုက်ရပေမယ့်.. တက်ခဲ့လိုက်ရသလိုပါပဲဗျာ...
I'd like to know the online security, i'm pretty sure that they dun wish to know indeed and they just want to avoid from self study.
Dude !! I agreed with u and most of pplz dun want self study .. and they forgot .. Google is friend .. there may be some many constraints such as language and times for them ...
And MZ memberz dun hate you as you thinked .. coz u and they aint lovingasame girl ..
I reli want to participate MZ anniversary .. but i couldnt able .. ... reli salute the guys who organized the occasion ... reli appreciated ...
ဒီပွဲကို တက်တော့ မတက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် အကြံလေးပေးချင်လို့ပါ...
ဖြစ်နိုင်ရင် Myanmar Info Tech (MICT Park) မှာ show မလုပ်တာကောင်းပါတယ်ဗျာ..
သွားရလာရ ခက်လွန်းလို့ပါ.. ကိုယ်ပိုင်ကားလေးရှိတဲ့လူတွေပဲ လွယ်ပါတယ်...
မဟုတ်ရင် ပြည်လမ်း.. အင်းစိန်လမ်းပေါ်ကနေ အထဲကို တမျှော်တခေါ်လမ်းလျှောက်ရတယ်ဗျာ...
အထဲရောက်တဲ့ကားဆိုတာကလည်း မျှော်ရင် လည်ပင်းရှည်တာပဲ အဖတ်တင်မှာဗျ...
Strand Hotel လောက်ဆိုရင်တော့ မဆိုးဘူးထင်တယ်ဗျ...
အနားမှာ ကွန်ပြူတာသင်တန်းတွေ ကွန်ပြူတာဆိုင်တွေလည်း မနည်းမနောဆိုတော့ ပရိသတ်တွေက အဲ့မှာဆို ပိုများနိုင်မလားလို့ပါ...
သွားရလာရတာကလည်း မြို့ထဲတင်ဆိုတော့ ဘတ်စကားတွေလည်း အများကြီးရောက်တယ်လေ....
ကျနော်ကတော့ လူမလာတာ လာရခက်တာကြောင့်လို့ ထင်ပါတယ်...
တားတားလည်း cd လေးလိုချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ
စီဒီက အစက ပွဲတက်သူများအားလုံးကို ၄င်းနေ့တွင်ပင် ေ၀နိုင်ရန်စီစဉ်ထားသော်လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် တစ်ပတ်ခန့်ကြာမှ ရနိုင်မည်ဟုသိရပါသည်..။ နယ်တွင်နေသူများ လိပ်စာလေးတွေ ပြောပေးရင် ပေးဖို့ပို အဆင်ပြေမလားမသိဘူး..
MZ ပွဲကို တက်ဖြစ်အောင် တက်မယ်လို့ စီစဉ်ထားပေမယ့် အလုပ် အပြောင်းအရွှေ့ကြောင့် မတက်ဖြစ်လိုက်ဘူး ။ ဖြစ်နိုင်ရင် MZ member တွေရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ၊ လိပ်စာတွေ ၊ ပွဲက မှတ်တမ်းပုံတွေရယ် ၊ ပွဲမှာ ပေးတဲ့ CD လိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။ ကျွန်တော်က မန်းကပါ ၊ မန်းမှာက ကိုရေခဲနဲ့ MK ကိုဘဲ အပြင်မှာတွေ့ဖူးတယ် ၊ ရန်ကုန်ကဆိုရင်တော့ စည်သူအောင် ကိုတွေ့ဘူးတယ် ၊ ကျန်တဲ့သူတွေကို အပြင်မှာ မတွေ့ဖူးဘူး ။ ဓာတ်ပုံထဲမှာပဲ တစ်ချို့ကို မြင်ဘူးတယ် ။ ပြီးတော့ MZ အတွက် ဘာမှ မကူညီနိုင်သေးဘူး ။ MZနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဘာတွေလုပ်နေတယ် ၊ ဘာကြောင့်လုပ်နေတယ် ၊ ဘာအတွက်လုပ်နေရတယ်ဆိုတာလေး ရှင်းပြပေးနိုင်ရင် ကောင်းမယ်ဗျာ ၊ တကယ်ကို ဘာမှ မသိလို့ပါ။ MZ အကြောင်းစုံ သိရရင် တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ကူညီပေးချင်၊ ကူညီပေးနိုင်အောင်လို့ပါ ၊ နောင်နှစ်မှာ ဒီထက်ပိုမို အောင်မြင်တိုးတက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်.....
Golden Internet Center
30st , bet 70 & 71st , Mandalay
လမ်း ၃၀ ပေါ်က ဆိုင်ဆိုရင်တော့ အရင်နှစ်ကအထိတော့ အဲ့သည့်နားမှာ ဗထူးကွင်းဘေးကဆိုင် နှစ်ဆိုင်ပဲရှိတာပဲ။ GoldenNet ရယ် နောက် အနောက်ဘက်ကဆိုင်က ဆိုက်ဘာစီးတီးလား ဘာလဲမသိတော့ဘူး။ Golden Internet Center ဆိုတော့ GoldenNet ကိုပြောတာလားဟင်။:D
ကိုပီစီ ကွန်နက်ရှင်း မကောင်း၍ တင်မရပါဆိုပါသဖြင့် သူ့အစားတင်ပေးပါတယ်
ထို့နောက် အစီအစဉ်တစ်ခု စသည် ကျွန်တော်က အဲဒီအချိန်ဆို ဗိုက်က ဆာနေကြ။ တစ်ခုခုစားလိုက်ရမှ ကျေနပ်သည်။ ဒီတော့ မတတ်နိုင်တော့။ ကင်တင်းသို့ ပြေးရတော့သည်။ အပြင်ထွက်လိုက်သည်နှင့် လေပူတွေက ဆီးကြိုနေသည်။ ပူလိုက်သည့်နွေ။ နာဂစ်အလွန်နွေ၏ ပူချက်က ကမ်းကုန်သောနေ့ရက်များတွင် ကျွန်တော်တို့တစ်တွေအတွက် အမှတ်တရရှိစရာ ကောင်းလှသော နေ့လေးတစ်ရက်ကို ဖန်တီးပေးခဲ့သော စီစဉ်သူ အားလုံးနှင့် စပွန်ဆာပေးသူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်နေမိသည်။ သူ့တို့မရှိလျှင် ယခုပွဲက ဖြစ်နိုင်စရာ အကြောင်းမရှိ။ စီစဉ်သူတွေအနေနှင့်လည်း စိတ်ရော၊ လူရော စိုက်ထုတ်ပြီး ပွဲကို အစီအစဉ်တကျ ဖြစ်အောင် စီစဉ်ရသည်။ စပွန်ဆာပေးသူများကလည်း ငွေရေးကြေးရေး အကျိုးအမြတ်ထက် နည်းပညာတိုးတက်ရေး အတွက် အဓိကထား ပံ့ပိုးကြသည်။ စေတနာတွေက အဖြူတွေ။ တစ်နည်းပြောရလျှင် အရောင်မဲ့ စေတနာများ။ အကြည်သက်သက် စေတနာများ။
ထမင်းကျော် တစ်ပွဲကို ကမန်းကတန်း စားသောက်ပြီး ပွဲကို ပြန်သွားတော့ ရေတစ်ဘူးကို တစ်ဝသောက် လိုက်ရသည်။ ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပရာ ခန်းမက အအေးရှိန်က ပူပြင်းသည့် သဲကန္တာရထဲမှ ရေခဲပြင်အပြည့် ဝင်ရိုးစွန်းကို ရောက်သွားသလို ဖြစ်မည်ကို သိသဖြင့် ကိုယ့် ခန္တာကိုယ်က အလိုက်သင့် ပြောင်းလဲပေးနိုင်ဖို့ လိုသည်။ မဟုတ်လျှင် တစ်ခါတည်း ပွဲပြတ်သွားနိုင်သည်။ ပွဲစီစဉ်သူ စည်သူကလည်း ပိုက်ဆံပေးရတာနဲ့ တန်အောင် အဲယားကွန်းကို မိုင်ကုန် ဖွင့်ခိုင်းထားပုံရသည်။ ညက အရှိန်ကလည်း မသေသေး။ ကြွက်တွင်း နှစ်ယောက်ဆုံကြသည်နှင့် နှစ်ပုလင်းလောက် ခန်းသွားသည်။ ဒါတောင် လေဆိပ်အထိ ပြန်ရမည်မို့။ မဟုတ်လျှင် တရုပ်တန်းမှာ မိုးလင်းနိုင်သည်။ အိတ်ဇစ်တာဆိုသည့် ငနဲက အသည်းကွဲတာကနည်းနည်း အဲဒါကိုအကြောင်းပြပြီး သူချည်းဖိသောက်သည်။ ပြီးတော့ သူက မမူး။ ကျွန်တော်သာ ဒေါင်ချာဆိုင်း သွားသည်။ вЂњချောင်းသာက ကိစ္စတွေကို မင်းမေ့လိုက်ပြီလားвЂќ ဆိုတာတွေကော вЂњသူက ကျွန်တော့်အချစ်ဦး ပါဆိုတာတွေကောвЂќ အော်ချင်ရာ အော်နေသဖြင့် သူနဲ့အတူ လိုက်အော်ပြီး ကိုယ်တောင် ဖီးတက်လာသည်။ တစ်ယောက်ကို ဇွတ်ထည့်ပြီး လွမ်းပစ်လိုက်သည်။ ဟိဟိ။
တောင်တွေးမြောက်တွေးနှင့် မျောနေပြီး စင်ပေါ်ကို သတိထားကြည့်မိတော့ ကိုရဲမြတ်သူ၊ မန္တလေး ကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အသင်း ဥက္ကဌ၊ သူက Alpha က ထုတ်သည့် ပါဋ္ဌိ အဘိဓါန်အကြောင်း ရှင်းပြသည်။ မြန်မာများ အတွက် မှတ်တိုင်တစ်ခု သေသေချာချာ ဖြစ်နေပြီး ဖြစ်သော ထိုတီထွင်ဖန်းတီးမှုအတွက် ကျွန်တော် ကိုရဲမြတ်သူကို ကျေးဇူးတင်နေမိသည်။ ကျွန်တော်က ပါဋ္ဌိဆိုသည့် စကားလုံးကိုပင် မှန်အောင် မပေါင်းတတ်။
ကျွန်တော် ခုမှ သေသေချာချာ ကြည့်မိသည်။ ကျွန်တော်အကိုကြီး ကိုပီဇီ ဘယ်များရောက်နေပါလိမ့်။ သူက ဘယ်သွားသွား သူ့သမီး၊ သူ့ဇနီးကို ခေါ်လာတတ်သည်။ လိုက်ရှာရင်း အရင်တွေ့သည်က ကိုပီဇီ၏ သမီးလေး။ တွေ့မယ့်တွေ့တော့လည်း သမီးလေးက စင်ပေါ်ကို ခပ်တည်တည်နှင့် တက်သွားသည်။ လူအများအတွက် အစားအသောက် ကျွေးမွေးချိန် ဖြစ်သည့်အတွက် ခန်းမထဲမှာ လူသိပ်မရှိ။
вЂњဟော .. ဟော.. ဟောတော့ ဖြန်းကနဲဆို လန့်လိုက်တာရှင် လောင်းလိုက်တာ ပက်လိုက်တာ ရေ .ရေ တွေရွဲကုန်ပြီ။ ရေ . ရေတွေရွဲကုန်ပြီ။ ပိတောက်ပန်းလေးတွေ လှိုင်လှိုင် ပွင့်ကြပြီပဲ вЂ¦вЂ¦.вЂќ
သမီးလေးက ဆိုနေရင်း ကသည်။ ဆိုနေတုန်း ကိုစည်သူက မိုက်ကို အနားကပ်ပေးတော့ သူက မိုက်ကိုယူလိုက်ပြီး အကျအနဆိုတော့သည်။ ကိိုပီဇီ ဘယ်ရောက်နေပါလိမ့်။ နောက်မှ ကိုပီဇီ အသံကို သတိထားမိသည်။ သူက သူ့သမီး ဘာလုပ်လုပ် ပြုံးပြုံးကြီးကြည့်ပြီး လက်ခုတ်တီး မြှောက်ပေးနေတတ်သည်။ ဒီတော့မှ ကတုံးဘိုကေနှင့် ကိုပီဇီကိုတွေ့တော့သည်။ လူကတော့ နဂိုကထက်ဝလာသည်။ ကိုဒီဘီအေနှင့် အဖော်ရနေပြီ ဖြစ်သည်။ ကိုပီဇီ ဝသလောက် ကိုပီဇီ့ မိန်းမက မဝ။ စားစရာရှိ သူချည်း စားနေသည်ထင်သည်။
အပြင်ဖက်ထွက်ကြည့်တော့ ဂျစ်ပစီဆိုသည့် ငနဲက ဟိုလူ့အတွက်ပြောလိုက် မုန့်တွေသွားဆွဲလိုက်၊ ဒီလူအတွက် ပြောလိုက် မုန့်တွေ သွားဆွဲလိုက် လုပ်နေသည်။ မုန့်ဝေသည့် အဒေါ်ကြီးက ဒီလူ ငါမှတ်မိသလောက်ဆို အနည်းဆုံး ဆယ်ခေါက်ပဲဟု ပြောသံကြားလိုက်ရသည်။ သို့သော် မှန်းချက်နှင့် နှမ်းထွက်မကိုက်သော လူဦးရေကြောင့် မုန့်တွေက ပိုနေသည်။ ကျွန်တော်တောင်ရေသန့်ဘူးကို အနည်းဆုံး ငါးဘူးခန့်ဆွဲလိုက်သေးသည်။ ရေလေးသောက်လိုက် ညက အရှိန်လေးတက်လာ လိုက်နှင့် အဆင်ပြေ နေသည်။
ပွဲပြန်စတော့ ခုံတွေကို စင်ပေါ်မှာခင်းထားသည်။ ထိုင်ခုံ သုံးလုံးနှင့် စားပွဲတစ်လုံး။ နောက်တော့ ဘယ်လိုဖြစ်သည် မသိ။ စားပွဲတွေ ထိုင်ခုန်တွေကို ပြန်ချသွားကြသည်။ လူတွေက ဗိုက်ရိုက်စားလိုက်ရသော မုန့်နှင့် ကော်ဖီများကြောင့် ပထမပိုင်းကထက် ပိုပြီး အသက်ဝင်လာကြသည်။ တကယ်တော့ ပွဲဆိုလျှင် အစားအသောက်ကို စောစော ကျွေးတာ ပိုကောင်းသည်ဟု ကျွန်တော်ထင်သည်။ လူတွေက ဗိုက်ပြည့်လာလျှင် ပိုပြီး တက်ကြွတတ်ကြသည်ဟု ကျွန်တော်ထင်သည်။ အော် вЂ¦ သူတို့ကျွေးတာ ငါတို့ စားထားတယ်လေ ဆိုပြီး အားနာပါးနာ ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားလာကြတာလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
вЂњကျွန်တော် ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းအရာက Digitizing ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာပါ။ အဲဒီလို Digitizing ဟာ ဘယ်လောက်အထိ အရေးပါသလဲဆိုရင် ခြောက်လလောက် စာကြည့်တိုက်မှာ မွှေဖို့လိုအပ်နေတဲ့ စာတမ်းပြုစု သူတွေအတွက် ခြောက်ရက်ခန့် အထိ အချိန်ကို ချုံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုချုံ့လိုက်ခြင်းအား ဖြင့် သူ့ရဲ့ Productivity တိုးတက်လာစေပါတယ် вЂ¦. တကယ်တော့ တကမ႓ာလုံးအတိုင်းအတာမှာတောင် Digitize လုပ်ထားတဲ့ ပမာဏဟာ вЂ¦. စနစ်တကျ Digitizing လုပ်တဲ့ နည်းစနစ်တွေကတော့ вЂ¦вЂќ
အာပေါင်အာရင်း သန်သန်၊ ထို့ပြင် ပညာရှင်ဆန်ဆန် တင်ပြတတ်သော ကိုညီလင်းဆက်၏ Digitizing အကြောင်းကို ကြားရပြန်တော့ သူ့လို စနစ်တကျ လေ့လာတတ်သည့် ပညာပါရမီကို လေးစားအားကျရသည်။ တကယ်တန်း စားတမ်းတစ်စောင် ပြုစုပြီး စာတမ်းတင်လျှင် မာစတာဘွဲ့ရနိုင်သည်ဟု ကျွန်တော် ထင်မိသည်။ သို့သော် ကိုညီလင်းဆက်က သာမန် Presentation ပုံစံမဟုတ်ပဲ ပါမောက္ခကြီးများရှေ့တွင် စာတမ်း တင်ပြီး ရှင်းပြနေသလို ပြောသွားသည်။ ကျွန်တော်တို့က ပါမောက္ခတွေမဟုတ်။ ပါးစပ်အဟောင်းသား ဖြင့် နားထောင်ခဲ့ရသည်။
ကိုညီလင်းဆက်၏ Presentation ကို နားထောင်ရင်း ကိုယ်ကိုကိုယ် သတိထားမိသည်က တုန်နေအောင် ချမ်းနေခြင်း ဖြစ်သည်။ လေအေးစက် အစွမ်းကုန်ဖွင့်ထားပြီး လူကနည်းသဖြင့် အေးချင်တိုင်းအေး နေတော့သည်။ ချမ်းရသည့်ကြားထဲ ဇာတိက ပြလာသည်။ ခုနေများ ဝီစကီလေးခွက်ပုန်းမော့ရလျှင် ဘယ်လောက်ကောင်းလိမ့်မလဲ ဟုတွေးမိသည်။ အိတ်ဇစ်တာကို လိုက်ရှာတော့ ဘယ်နေရာရောက်နေသည် မသိ။ စတိတ်စင်ပေါ်မှာတော့ ခုန်တွေ ပြန်ခင်းနေလေပြီ။ ဒီတစ်ခါတော့ ထိုင်ခုန်က လေးလုံး။ စားပွဲကတစ်ခု။ ပန်းထိုးထားသည့် ပန်းကန်တစ်လုံးကလည်း ပါလိုက်သေးသည်။ ရေသန့်ဘူးတွေက ပိတ်လျှက်သား။ ဖန်ခွက်တွေတော့ ချထားသည်။ ရေသန့်ဘူးတွေကို သောက်မှာ စိုး၍ထင့်။ လုံးဝဖွင့်မထား။ သူ့အတွက် မကျန်မှာစိုးသည့်အတွက် ဆင်ကြံကြံထားသည့် စည်သူ့လက်ချက်ပေလော။ ခုမှ သတိထားမိတာ တစ်ခုရှိသည်။ နဂိုက အွန်လိုင်းမှာတုန်းက အသက်ခပ်ကြီးကြီး ရော့ကာကြီးတစ်ယောက်ဟု ထင်ထားသော တေဇာဆိုသည်ကို တွေ့ချင်လာသည်။ ဒီလိုနှင့် ပွဲမှာ အရပ်အရှည်ဆုံး ဂျစ်ပစီကို မေးကြည့်တော့ စင်ပေါ်ကတစ်ယောက်ဟု ပြောသည်။ အခု Presentation လုပ်နေသည့် စက်က ကိုတေဇာစက်ဟုလည်း ပြောသည်။ အစောပိုင်းကတည်းက သတိထားမိတာရှိသည်။ Presentation လုပ်သည့်စက်က အနည်းဆုံး Mac Book ဖြစ်ရမည်ဟု ခန့်မှန်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်အသဲစွဲ Apple၊ မြင်သာမြင် မကျင်ရသည့် Apple၊ Multi Touch လေးတော့ ထိဖူးတယ်ရှိအောင် ထိချင်လာသည်။ သို့သော် ယခုလည်း မြင်သာမြင် မကျင်ရဖို့ များသည်။ အကောင်အထည်အတိုင်း Apple ကို အရှင်လတ်လတ် မြင်ဘူးခြင်း။
вЂњကဲ ကိုစေတန်ရေ вЂ¦ စလိုက်ကြရအောင် вЂ¦вЂќ
ဇာတ်ထဲက အသံနှင့် ကိုပီဇီက ပြောသည်။ ကိုပီဇီကို မြင်တော့ ကိုဒီဘီကို သတိရသည်။ သူသာပါလာလျှင် စတိတ်စင်ပေါ်တွင် လူဝကြီးနှစ်ဦး ဘက်မျှ သွားမည်ဖြစ်သည်။
вЂњကျွန်တော်တို့ Freelance အကြောင်း вЂ¦ Freelance သမားတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဓာတ် вЂ¦вЂќ
вЂњကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေဟာ မြန်မာပြည်မှာဆိုရင် မြန်မာတွေပါပဲ вЂ¦вЂќ
ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး အစီအစဉ်တစ်ခု ဖြစ်သော Tech Talk အစီအစဉ်မှာ မေးသူနှင့် ဖြေသူ အံဝင်ခွင်ကျ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လိုအပ်ချက်တွေကို မီးမောင်းထိုးပြသွားသူက ကိုရဲမြတ်သူ။ International Freelancer သမားတစ်ယောက်ရဲ့ အရည်အချင်းတွေကို လှစ်ဟပြသွားသူက ကိုအောင်ထက်ဆိုလား အသားဖြူဖြူ၊ ပြုံးပြုံးကြီးနှင့် အကိုကြီး။ Local အနေနှင့် ဝင်ပေါက်တစ်ခုများ ရနိုင်မလားဆိုသည့် စေတနာနှင့် မေးခွန်းတွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခုပစ်လွှတ်နေသော ကိုပီဇီ။ Local ကနေ Freelancer တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်ကို တစ်ခုပြီး တစ်ခု ဖွင့်ဟနေသာ ကိုစေတန်တို့ ပွဲလေးက အပီဆုံးဟု ကျွန်တော် ဆိုချင်ပါသည်။ (ဒီပွဲအကြောင်းကို ကိုပီဇီကလည်း ရေးဦးမည်ဟု ပြောသဖြင့် ကျွန်တော် အသေးစိတ် မရေးလိုတော့) ကျွန်တော်လည်း မုံရွာကားမှီအောင် ပြေးရဦးမည် ဖြစ်သည်။ အဖေနေမကောင်းသည့် ကြားက ဒီပွဲကို တက်ချင်လွန်းသဖြင့် မရအရ မုံရွာက ဆင်းလာခဲ့သော ကျွန်တော်က နောက်ဆံတင်းနေသည်။ ဒီတော့ Tech Talk ပြီးတာနဲ့ ပြန်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ရသည်။ ဆက်နေချင်သော်လည်း ဘယ်လို မှမတတ်နိုင်တော့။ မဲလည်း မနှိုက်နိုင်တော့။ ညပွဲလည်း မဆက်နိုင်တော့။ စိတ်ထဲမှာတော့ မကောင်း။ အားလုံးကို နှုတ်ဆက်ရတော့မည်။
вЂњအားလုံးပဲ вЂ¦ ကျွန်တော် ပြန်ပါဦးမည် ခင်ဗျာвЂќ
ပွဲတက်ချင်သော်လည်း မတက်လိုက်ရသည့် ဂူးဂူးအတွက်
ကျွန်တော် အခုတစ်လောမအားလို့။ အဲမဟုတ်ပါဘူး။ Economy crisis ကြောင့် ခံနေရတဲ့ ဂျစ်ပဆီလေး ဖြစ်နေရပါသည်။ဒါပေမယ့် အမ်ဇက် က အော် တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပါဝင်ခွင့်ရလို့ပျော်ခဲ့ရပါသည်။ ဒါပေမယ့် စိတ်မကောင်းစရာကတော့ ကျွန်တော် အပြည့် အဝမကူညီနိုင်ခဲ့တဲ့ အတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျား။ လူနည်းပေမယ့် ပျော်ဖို့ကောင်းခဲ့ပါတယ်။ နောက်နှစ်လည်း ကျွန်တော် အော် အဖွဲထဲမှာ ပါဝင်ခွင့်ရပါစေလို့ ဂျစ်ပဆီလေး ဆုတောင်းလျက်ပါခင်ဗျား။
နောက်တစ်ခု စိတ်မကောင်းတာကတော့ ကျွန်တော် ရိုက်ပေးတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေက quality မကောင်းဘူးလို့ကြားမိသေးတယ်။ အမှောင်ထဲမှာ ရိုက်ရတဲ့အတွက် အလင်းမပါတာတွေလည်း ဖြစ်မယ်။ ကျွန်တော် ရိုက်တာည့ံခဲ့ရင် ဆောရီးပါဗျား။
ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Goldennet ဆိုင်ပါ ။ကိုလူပျိုကြီးက မန်းကပါလားခင်ဗျာ။
နောက်တစ်ဆိုင်က cyber space ပါ။
လာခဲ့မိပြီ အကောင်းမေးတာမဟုတ်ဘူး:D အဲ့သည့်ဆိုင်ဆိုရင် ဘယ်တော့မှ မသုံးဘူးလို့ပြောမလို့:D လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်က သူများမြန်တယ်ပြောပြောနေတာနဲ့ သွားသုံးပါတယ် ကျုပ်ကို Download လုပ်တာ သူများတွေ ချက်နေတာ နှေးကုန်မှာစိုးလို့ မလုပ်ပါနဲ့ပြောကတည်းက ဘယ်တော့မှ မသုံးတော့ဘူး ဟွန်း ဆိတ်ကြီးတယ်နော် လူပျိုကြီး ဘာမှတ်နေသလဲ။ ကျုပ်မှာ သူများလိုလည်း မချက်တတ် စာဖတ်တာနဲ့ Download လုပ်တာပဲ လုပ်တတ်တာ သူများတွေလို အမျိုးစုံမသုံးတတ်ဘူးဗျ
အဲ... ဟိုနေ့က post ၂ ခု merge လုပ်လိုက်တာ... ကျွန်တော် post ကို ကိုပီဇီ post နဲ့ပေါင်းလိုက်တာ ကိုပီဇီ က MZ သတင်းမှာ ဝင်ရေးသလိုလိုဖြစ်နေပြီ တကယ်တန်း ကျွန်တော်ရွှေ့ထားတာနော်... မနေ့က မောင်ပြုံးပြောလို့သိလိုက်တာ... ကျွန်တော် merge လုပ်ပြီး ကြော်ငြာဖို့မေ့သွားတယ် :P
အဲဒီတော့ ဘယ်လို ပြဿနာရှိလို့လဲဗျ ... ကိုစေတန်ပြောမှ သတိထားမိတယ် ... ကျွန်တော်ရေးတုန်းက ဆောင်းပါးမှာပါလို့ ခုဘယ်လို ဖြစ်နေပါလိမ့်လို့ ထင်တော့ထင်သား ... သတင်းမှာ ဝင်ရေးလို့ မရဘူးလား .. အဲဒီလိုလား
သတင်းမှာက MZ admin နဲ့ mod သာ ဝင်ရေးခွင့်ရှိပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ MZ သီးသန့် သတင်းဖြစ်နေလို့ပါ။
ကျနော်မနေ့တည်းက ပြောမလို့ပဲဗျာ.. ကော်နက်ရှင်က စုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ်ကို ဆိုး၀ါးနေလို့..
ကျနော်ဆီမှာ ပွဲက ဓါတ်ပုံတွေရှိပါသည်.. ကျနော် ကိုစေတန်တို့ဆိုင်.. (Cycodyno Internet Cafe' လမ်း ၅၀ အထက်ဘလောက်) မှာ ထားထားပေးပါမည်.. ။... စုစုပေါင်း.. ( ကျနော့် camera နှင့် ကိုစေတန့် camera နှစ်ခုပေါင်း.. ) 800 MB လောက်ရှိပါတယ်.. ထို့ကြောင့် Stick နဲ့့ လာယူပါက အဆင်ပြေမည်ထင်ပါသည်။
ကျနော်ထံ တိုက်ရိုက်ယူလို့ပါကလည်း phone 095076380 သို့ ဆက်သွယ်ပြီး ယူနိုင်ပါသည်.. ။
Upload တင်ပေးရန် ခက်ခဲမည်ထင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်..။
နယ်မှသူများ အဆင်ပြေမည့် နည်းလမ်းကိုလည်း .၀ိုင်း၀န်း အကြံပေးစေလိုပါသည်..။
ဘန်းကျော်အပြင်ဘက်မှ လူများ (အထူးသဖြင့် SG မှ လူများကိုမူ လူကြုံရှိပါက ထည့်ပေးလိုက်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း.. )
Public Relationship Moderator
MZ ပွဲကို မလာနိုင်ပေမယ့် သတင်းကိုတော့ စောင့်နားထောင်နေခဲ့ပါတယ်...
နည်းပညာ အရ အောင်မြင်တာလည်း အောင်မြင်တာပါပဲ...
လူများပြီး ပွဲစည်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲပေါ့...
လူမများပေမဲ့ တကယ့်ကို MZ ကို သံယောဇဉ်ကြီးတဲ့သူတွေ၊ စေတနာထားသူတွေ နည်းပညာ မြတ်နိုးသူတွေကတော့ အခက်အခဲ အမျိုးမျိုးကြားထဲကနေ ရောက်အောင်လာခဲ့ကြတဲ့အတွက် ပွဲစည်ခဲ့တယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်...
နှစ်နှစ်သား သက်တမ်းမှာ အတိုက်အခိုက်တွေအမျိုးမျိူး၊ အင်တာနက် အမြန်နှုံးအမျိုးမျိုးနဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ MZ ဟာ၊ အသက်ငယ်သေးပေမယ့် -
ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပက နည်းပညာ ချစ်မြတ်နိုးသူတွေ၊
မြန်မာ့ IT လောကနဲ့ နောက်လာမယ့် လူငယ်တွေအတွက် နည်းပညာ ခြေရာတွေ ချန်ထားပေးခဲ့ချင်သူတွေ အတွက် MZ ဟာ တကယ့် နေရာကောင်းပါပဲ။
IT နည်းပညာ သီးသန့်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ခိုင်ခိုင်မာမာ လျောက်လှမ်းလာခဲ့တဲ့ အတွက် အခုဆိုရင် ကွန်ပျူတာပညာတွေကို စတင်လေ့လာမယ့်သူတွေ၊ လေ့လာနေဆဲသူတွေနဲ့ တတ်စွမ်းသမျှ ပြန်လည်ေ၀မျှလိုသူတွေ အတွက် အင်တာနက်ပေါ်က ဆုံရပ်နေရာ တစ်ခု ဖြစ်နေပါပြီ...
တကယ်တမ်းပြောရရင် အခုမှ ကွန်ပျူတာပညာကို စတင်လေ့လာမယ့် မြန်မာလူငယ်တွေအတွက် အင်တာနက်ထဲမှာ မြန်မာလိုတည်ထောင်ထားတဲ့ နည်းပညာ၀က်ဆိုက်တွေ အရမ်းနည်းပါသေးတယ်.. ဒါပေမယ့် လက်ရှိ အရေအတွက်လောက်ကိုပဲ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်လောက်က အိုင်တီကို စတင်လေ့လာခဲ့တဲ့ မြန်မာလူငယ်တွေအတွက် မရနိုင်ခဲ့၊ မရှိခဲ့ပါဘူး
အဲဒီအချိန်ကလူငယ်တွေဟာ ကွန်ပျူတာ အခြေခံလေးတွေကအစ အင်္ဂလိပ်လို လေ့လာခဲ့ရတဲ့သူတွေ များပါတယ်... အခုအချိန်မှာတော့ MZ လိုနေရာမှာ နေ့တိုင်း တစ်နာရီလောက် အင်တာနက်သုံးရင်း လေ့လာ၊ မေးမြန်း၊ မှတ်သားသွားနိုင်တယ် ဆိုရင်တောင် တော်တန်ရုံ သင်တန်းတစ်ခုကို သွားတက်တာထက် အများကြီး ပညာရနိုင်ပါတယ်...
ကျွန်တော်ဆိုရင် вЂњကွန်ပျူတာ သင်တန်းတက်ချင်တယ် ဘယ်မှာ တက်ရင်ကောင်းမလဲвЂќ စသည့်ဖြင့် မေးလာတဲ့သူတွေကို вЂњဘာသင်တန်းမှ မတက်ခင် ကိုယ့်ဟာကိုယ် မြန်မာလိုဖတ်ပြီး လေ့လာသင်ယူလို့ရတဲ့ နေရာ၊ မေးလို့ရတဲ့ နေရာ အင်တာနက်မှာ ရှိတယ်၊ အဲဒီမှာ အရင်လေ့လာပါလားвЂќ ဆိုပြီး MZ လိပ်စာကို ညွှန်းပေးခဲ့တဲ့သူ အတော်များခဲ့ပါတယ်...
ဒီပွဲမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ မလာနိုင်ခဲ့ကြသူတွေရှိခဲ့ပေယ့်လည်း သက်တမ်းရှည်လာတာနဲ့ အမျှ ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ ပရောဂျက်တွေ၊ အများအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းမယ့် နည်းပညာ အဖြေတွေကို ရလာတာ မြင်တွေ့ရတဲ့အတွက် ပျော်ရွှင်မိပါတယ်
ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့ရတဲ့ ပရောဂျက်တွေမဟုတ်ပေမဲ့ MZ member တစ်ယောက်အနေနဲ့ရော၊ မြန်မာလူငယ်တစ်ယောက် အနေနဲ့ရော အရမ်းကို ၀မ်းသာ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်... (ဥပမာ - http://ornagai.com/ နဲ့ http://www.ornagai.com/site/mobile - သူများတွေ စီးပွားရေးအရ အမြတ်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ Mobile အဘိဓါန်)
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် IT နည်းပညာတွေကို လေ့လာသင်ယူချင်ပေမယ့် သင်တန်း မတက်နိုင်သူတွေ ...
လျှို့၀ှက်စရာမဟုတ်တဲ့ နည်းပညာလေးတွေကို လက်တလုံးခြား ၀ှက်ဖဲလုပ်ထားပြီး သင်နေတဲ့ သင်တန်းမျိုးတွေကို မတက်ချင်သူတွေ အတွက်...
ပညာဒါနပြုလုပ်လိုသူတွေ ... စတဲ့သူတွေ အားလုံးအတွက်
MZ ဟာ နည်းပညာကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့ ရပ်နီးရပ်ေ၀းက မြန်မာလူငယ်တွေရဲ့ ၀ိုင်း၀န်းကြိုးစား အားထုတ်မှုနဲ့ နွံထဲက ကြာဖြူတစ်ပွင့်လို အမြဲလှပ ရှင်သန်နေမှာပါ... :):)
အားလုံး၀ိုင်းကြိုးစားရင် နောက်ထပ် နောက်ထပ်ပွဲတွေ ဖြစ်လာမှာပါဗျာ။
အခု ကျွန်တော် ဒီမှာရေးနေတဲ့အချိန် ကိုညမီးအိမ် ဒီThread ကိုကြည့်နေတာတွေ့ရတယ်။ သူလည်း လွမ်းမှာ သေချာတယ်ဗျာ။
အစ်ကိုထင်လို့ပါ အဲဒီအချိန် ကိုအမ်ဇက် လုံး၀ပြန်မရနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒီနှစ် ပွဲက သက်သေပြလိုက်ပါတယ်။